Shirweyne Laba Beelood Uga Furmay Magaaladda Burco. AwdalMedia Awdalmedia Shirweyne Laba Beelood Uga Furmay Magaaladda Burco.
Shirweynaha labadda beelood ee bariga iyo galbeedka Burco (Habarjeclo iyo Gargaxis) ayaa maanta ka furmay magaalada Burco, kaasi oo socon doonno muddo afar cisho ah.
Shirkan oo loo bixiyey Samo Talis ayaa la sheegay in lagaga wada hadli doono wada jirka iyo horumarinta deegaanada labadan beelood wada degaan oo ah dhul aad u balaadhan, taasi oo ay ka heshiinayaan wixii dhib ee soo kala dhexmaray.
Shirkan waxa maanta ka soo qaybgallay ergooyinka dhaqanka ee beelahaasi, kuwaas oo ay kale hoggaaminayeen Suldaanka Guud ee Beelaha Habar-jeclo Suldaan Cabdilaahi Cali Muuse iyo waliba Suldaanka Guud ee Beelaha Garxajis Suldaan Maxamed Suldaan Cabdiqaadir .
Suldaanka Guud ee Beelaha Habar Jeclo ayaa sheegay inay ka soo saarayaan qodobo mihiim ah, waxaanu yidhi “waa Shir caadiya, oo labada Beelood danahooda ayey kaga hadlayaan, Shir khayr qaba, oo qodobo muhiimi ka soo baxaan, ayaan rajaynayaa ALLE idimkii inuu inoo dhaco, inuu Shirku inoogu bilawdo si khayr badan, inooguna dhammaado si khayr badan, ayeyna ALLE ka baryeynaa”.
Suldaanka Guud ee Beelaha Garxajis ayaa oo isna shirka ka hadlay ayaa yidhi “Inuu inoo dhaco Shir la isku laab xaadho, oo lagu soo af jaro wax walba la kala tirsanayo ayaan ALLE ka baryeyaa, ALLENA ha inooga dhigo Shir wanaagsan, “
Shirkan ayaaa noqonaya shirkii ugu horeeyey ee ay kaga hadlayaan danaha labadooda beelood iyo sidii wax uga qaban lahaayeen dhibaatooyin badan oo dhexdooda ka dhacay sidii loo soo afjari lahaa.
Somali ku Dhimatay Gaari Ambulance ah Oo Lagu Qarxiyey Gudaha Kenya.